Ngathi | Iimveliso ze-Stainless ze-Hebei HanWang Co., Ltd.
Inqanaba lezixhobo zenkampani kwilizwe liphela, amandla oqinileyo obuchwephesha, umgangatho wemveliso ezinzileyo.
Iimveliso zensimbi engenazingcingo i-Hebei Hanwang Co., Ltd., yasekwa ngo-Agasti ka-2017, uyilo lweprojekthi yeetoni ezili-100,000, iindleko zizonke ze-yuan ezi-1.3 yezigidigidi, isigaba sokuqala seprojekthi sigqityiwe. Ngo-2019, iqela lamandla e-jizhong, elinye lamashishini aphezulu angama-500, liza kujoyina iqela lamandla e-jizhong, lijolise ekwakheni isiseko semveliso yokuzila ephezulu-ekhaya nakumazwe aphesheya ngombane ochanekileyo, oza kuthi ube ngumzi mveliso.
Inqanaba lezixhobo zenkampani kwilizwe liphela, amandla oqinileyo obuchwephesha, umgangatho wemveliso ezinzileyo. Uyilo lweMveliso, amandla emveliso kunye namandla okuphuhlisa itekhnoloji kushishino olukhokelayo. Inkampani yazise i-M3-m2-m24 insimbi engenazingcingo kwizikhululo ezininzi ebanda ngaphezulu komatshini ongaphezulu kwama-30 eTaiwan, M6 - m2-m24 carbon intsimbi ngaphezulu kwama-30 oomatshini ababandayo bezihloko ezininzi, umatshini ojikelezayo, umatshini wokucofa, umatshini opheleleyo Iiseti / izixhobo ezingaphezulu kwama-200, umoya olawulwayo oqhubekayo ombhoxo womnatha ojikelezayo wokuvelisa unyango lomatshini 8, 11 oomatshini bokuzoba ngocingo, i-spheroidizing annealing eziko 2 iiseti, umatshini wokudubula ozenzekelayo kunye nomatshini wokucoca insimbi. 1. Inkampani inengcali isidanga seqela lezobuchwephesha elomeleleyo, indawo yokuvavanya ixhotyiswe ngokupheleleyo, ikwazi ukufumanisa ngokuchanekileyo kunye nokuhlalutya izixhobo zemveliso kunye nomgangatho.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-aerospace, ukuhamba kaloliwe, unxibelelwano, ubunjineli baseLwandle, ulwakhiwo lwasezidolophini kunye nemimandla ye-petrochemical. Iimveliso zethu athengise kakuhle kumaphondo angaphezu kwama-30, izixeko kunye nemimandla e-China, kwaye baye bangena ngempumelelo kwimarike yamazwe ngamazwe. Okwangoku, siseke ubudlelwane bexesha elide kunye ne-dubai, iRussia, i-India, i-Egypt kunye namanye amazwe, kwaye inethiwekhi yethu yokuthengisa iye yanda ngokukhawuleza kuwo onke amacala.
Phantsi komgaqo wophuhliso "wophando kunye nophuhliso lomgangatho wokuqala wentsebenzo yentsebenzo kunye nokuphumelela", inkampani ibisoloko inikezela abathengi ngowona mgangatho uphezulu, ozinzileyo, iimveliso kunye neenkonzo ezinokuthenjwa.